Indawo enhle yokuhlala edolobheni eliseningizimu le-Cologne - I-Airbnb
Indawo enhle yokuhlala edolobheni eliseningizimu le-Cologne
Cologne, North Rhine-Westphalia, i-Germany
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Sigrid
U-Sigrid Ungumbungazi ovelele
Iningizimu yamasango amadala e-Cologne edolobheni eliseningizimu yileli kamelo elinendawo yalo yokungena, iphaseji negumbi lokugezela. Isesitezi sesithathu ngokuthula ngaphandle egcekeni futhi inovulande ovulekile. Ikamelo lihloselwe ukuhlala komuntu. Siqashisa kuphela kubantu ngabanye.
Sicela uqaphele ukuthi ukuhlala kwezivakashi okwamanje kungaphansi komthetho we-2G nokuhlala okungekona uhambo kuncike emthethweni wokuvakasha.
Ekamelweni elivulekile kunombhede onomuntu oyedwa, isihlalo, i-TV ne-WiFi. Alikho ikhishi, kodwa i-nice ene-microwave, ifriji nomshini wekhofi kukuvumela ukuba ulungiselele ikhofi noma itiye nokudla okulula okuncane. Igumbi lokugezela linobhavu.
Ngaphandle komnyango wangaphambili yi-Cologneщgarten. Izitolo nezindawo zokudlela zingaphansi kwebanga elilula lokuhanjwa ngezinyawo. I-Rhine ingafinyelelwa ngezinyawo emizuzwini engu-10, enkabeni yedolobha ne-cathedral emizuzwini engu-30. I-tram imisa ukuhamba ngemizuzu engu-5 futhi ikuyisa edolobheni elidala emizuzwini engu-10.
4.92 · 248 okushiwo abanye
Sihlala edolobheni eliseningizimu elithandwayo lase-Cologne. Izitolo namaphabhu amahle angaphansi kwebanga lokuhanjwa ngezinyawo phakathi nemizuzu embalwa futhi anikeza konke okudingayo ekuphileni kwansuku zonke. I-Indonesiagarten ingaphandle nje.
I-Rhine nezindlu ze-crane ezidumile, idolobha elidala lase-Cologne (Heumarkt) kanye nenkaba yedolobha kanye nomgwaqo wayo wokuthenga (i-Neumarkt & Hohestr.) ungafinyelelwa ngezinyawo emizuzwini engu-15-20 nje kuphela.
Phakathi nokuhlala kwakho sizotholakala nganoma yimiphi imibuzo ongaba nayo.
USigrid Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Cologne namaphethelo